အရည်အသွေးမြင့်မားဝိုင် Cooler ရေခဲပြင် Bucket ဘီယာစည်ပိုင်း
acrylic အကြီးစားဝိုင် Cooler ရေခဲပြင် Bucket ဘီယာစည်ပိုင်း
အချိုရည်, ဘီယာ, အေးမြစောင့်ရှောက်ဖို့စပျစ်ရည်ကိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော acrylic အကြီးစားဝိုင် Cooler ရေခဲပြင် Bucket ဘီယာစည်ပိုင်း -Beverage ကန် / ဘီယာ Bucket ။
acrylic အကြီးစားဝိုင် Cooler ရေခဲပြင် Bucket / Beverage ကန် / ဘီယာ Bucket, ဘီယာအဘို့မဟာအချိုရည်။ entertaining.Our အကောင်းဆုံး Barware စုဆောင်းခြင်းများအတွက်စုံလင်သောပိုကောင်းသင့်ရဲ့ပါတီနှင့်နေအိမ်အစေခံရန်အမျိုးမျိုးစတိုင်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရေခဲပြင်ပုံး, ဝိုင်အေးနှင့်ဘီယာ Bucket, ပါတီ Tubs နှင့်အတူချစ်စဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
စပျစ်ရည်ကို Cooler ရေခဲပြင် Bucket ဘီယာစည်ပိုင်းကိုသင်အများဆုံးအရွယ်အစားစွမ်းရည်နှင့်သုံးစွဲဖို့နေဆဲလွယ်ကူသောပေးသည်။ ရေကူးကန်, ဘား, အထူးအဖြစ်အပျက်သို့မဟုတ် function ကိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဤကြီးမားခြင်းနှင့်ပေါ့ပါး tubs အလွယ်တကူအထူးကော်ပိုရေးရှင်းပရိုမိုးရှင်းများ, ပုဂ္ဂလိကရေးရာသို့မဟုတ်သင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရချင်ဘယ်မှာမဆိုအခါသမယများအတွက် branded နိုင်ပါသည်။ ကြာရှည်ခံမှုနှငျ့ခှနျအားအဘို့အကြမ်းခံများနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ acrylic ဒြပ်ပေါင်းများကနေဖန်ဆင်းတော်, ဒီစည်ပိုင်းရှည်, အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။
ရေခဲပြင် Bucket ဘီယာစည်ပိုင်း
46.5 * 28.6 * 23.5cm
1200 သတ်မှတ်မည် / သတ်မှတ်ပေးသည်
ပုံမှန်နျ Standard: တစ်ဦးချင်းစီအပိုင်းအစ (set ကို) / polybag
အဆိုပါဝိုင် Cooler ရေခဲပြင် Bucket ဘီယာစည်ပိုင်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြန်ကြားရေး:
ရေခဲပြင် Bucket ဘီယာစည်ပိုင်းစပျစ်ရည်, ရှမ်ပိန်သို့မဟုတ်အခြားအဖျော်ယမကာအဘို့ကြီးသောဖြစ်ပါတယ်။ ဖျော်ဖြေမှု, ပါတီများနှင့်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော။
ကြာရှည်ခံမှုနှငျ့ခှနျအားအဘို့အကြမ်းခံများနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ acrylic ဒြပ်ပေါင်းများကနေဖန်ဆင်းတော်, ဒီစည်ပိုင်းရှည်, အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ဧည့်သည်များကတရားဝင်မိုးလုံလေလုံ setting ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့ပြင်ပတွင် setting ကိုဖြစ်စေ, ဒီစပျစ်ရည်ကိုဆာဗာ၏အလှတရားအားဖြင့်အထင်ကြီးစရာဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်ဤဝိုင် Cooler ရေခဲပြင် Bucket ဘီယာစည်ပိုင်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုဂရုစိုက်စေခြင်းငှါ
ဘီယာ 2.How အများအပြားပုလင်းကကိုင်ထားသလဲ,
ဤသည်ရေခဲပြင် Bucket ဘီယာစည်ပိုင်း 10 ပုလင်းကိုင်ထားမည်ဖြစ်သည်။
သတိ:သင်ရေခဲပြင် Bucket အတွက်အအေးရေခဲထားပါတဲ့အခါမှာသတိထားပါ။
သုံးပြီးပြီးနောက်ကို item clean 2.Please ။
အဲဒါကိုကောင်းကောင်းမတ်တပ်ရပ်စျေးနှုန်းအဘို့အ nice ပါတီစည်ပိုင်း, ငါသည်အဘယ်သူမျှမ complains.love ရှိသည်ငါ၏အအလှဆင်အပေါ်ကြော့လိုက်ဖက်အရာအားလုံးကြည့်ရှုကြ၏။
ကျနော်တို့အနေနဲ့ရေခဲရေပုံးဘို့ငါတို့သမီး၏မင်္ဂလာဆောင်မှာဒီကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်ဧည့်ခံမှာကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ကိုဝတ်ပြုကြ၏။ ခိုင်ခံ့နှင့်ကြံ့ခိုင်။
ဤသည်ရေခဲစည်ပိုင်းပဲစုံလင်သည်။ စင်ကြယ်သောရေခဲနှင့်စပျစ်ရည်၏စုံတွဲတစ်တွဲပုလင်းသို့မဟုတ်ရုံစပျစ်ရည်ကို chiller အဖြစ်သုံးစွဲဖို့အလုံအလောက်အကြီးစား။ စျေးသိပ်မကြီးတဲ့အလွန်ကြံ့ခိုင်။ စုံလင်သောပါတီစည်ပိုင်း !!!!
စောင့်ရှောက်ဖို့အချိုရည်, ဘီယာ, စပျစ်ရည်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော acrylic အကြီးစားဝိုင် Cooler ရေခဲပြင် Bucket ဘီယာစည်ပိုင်း -Beverage ကန် / ဘီယာ Bucket ......
acrylic အကြီးစားရေခဲပြင် Bucket-ဝိုင် Cooler Bucket ဘီယာစည်ပိုင်း
acrylic အကြီးစားရေခဲပြင် Bucket-ဝိုင် Cooler Bucket ဘီယာ / Beverage ကန်, အချိုရည်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော, ဘီယာ, အေးမြစောင့်ရှောက်ဖို့စပျစ်ရည်ကို .......